मदिराको वैदिक इतिहास.. | Hamro Patro
मदिराको वैदिक इतिहास..
रक्सीको पौराणीक प्रसंग
मदिरा अर्थात रक्सी, सामान्यतया हाम्रो बुझाई । आजभोलीका मान्छे रक्सी खाने भएर बिग्रिए भन्ने आक्षेप यो पुस्ताले सदैव खप्दै आएको छ । गाली गर्ने र गाली खाने दुबै अक्सर एउटै उन्मादमा रक्सी गन्तव्यमा भेटिने गर्दछन् । भट्टि, रेष्टुराँ, बार, पार्टी, भोज, भत्तेर, सुख्ख, दुख्ख, बैस, बुढ्यौली सर्वत्र छाएको यस मदिरा वास्तवमा अहिलेको आधुनिक कालको उपज हैन्, पक्कै पनि यसको दुरुपयोग भनें अहिले ज्यादै भएको हो तथापि वैदिक काल देखि नै यसको प्रयोग हुँदै आएको ईतिहाँस छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् : रोनिगियाहरु नेपाल आए भने के हुन्छ ?
स्मरण रहोस् बिश्व अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा हतियार व्यापार र मदिरा व्यापार कारखानाहरुले धानेका छन् । मदिराको यहि गुणगानलाई बुझेर होला, हाम्रा कवी भूपी शेरचनले पनि लेखिदिए, एउटा मदहोश मदिरा गजल ।
एक फेर पिएर त हेर , पिउन झन गाह्रो छ
मरेर शहीद हुनेहरु, एकफेर जिएर त हेर
जिउन झन गाह्रो छ
मदिराको यस नशामा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्, धेरैको समबन्ध, घरपरिवार तहस नहस
भएको छ । मदिरा पक्कै पनि राम्रो कुरा त कहाँ हो र ? आउनुहोस् जानकारी लिउ, मदिराको वैदिक इतिहासको बारेमा ।
ईशापूर्व १७०० बर्ष देखिको ईतिहाँस भएको रिग्वेदले प्रथम पटक मदिराको उल्लेख गरेको पाइन्छ । सोम र प्रहामनाका नाममा मदिराजन्य तरल पदार्थ लाई बीषका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । उतातर्फ आर्यूवेदले असभस र अरिस्थासका नाममा बिभिन्न बनस्पतीका रस मिसाएर बनाइएको नशा लाग्ने
ओखतीको उल्लेख गरेको छ, यस बनस्पतीजन्य ओखती मदिरा नै हो र यसको प्रयोग न्यून मात्रामा
गर्नुपर्ने र बिशेषज्ञको सुझावमा गर्नुपर्ने अव्यक्त नियम पनि रहेको छ । यस्ता असभस र अरिस्थासका प्रयोगले पाचन प्रणालीको समस्या र रक्तसञ्चारको समस्या कम गर्ने प्रयोगात्मक ईतिहास छ ।
असुरहरुका गुरु शुक्राचार्यको एउटा पौराणीक प्रसंग यहाँ जोड्न चाह्यौं, शुक्राचार्य असुरहरुका गुरु अनि
शिवका परमभक्त हुन् । उनलाई मात्र मरेका मान्छेलाई बचाँउन सक्ने संजिवनी मन्त्र थाहा हुन्छ, असुर र देवहरुको यूद्धमा शुक्राचार्यको यस सीपका कारणले देवसेनाहरु हारिरहेको हुन्छन् ।
देवताका गुरु बृहस्पतीले आफ्ना पुत्र काचालाई शुक्राचार्यसंग यस संजिवनी मन्त्र बुझ्न पठाँउदछन् । शुक्राचार्यकी सुन्दरी छोरी देवयानीलाई सर्वप्रथम मायाजालमा पार्न काचालाई बृहस्पतीले निर्देशन दिएका हुन्छन् । काँचाले देवयानीसंग नजिक भएर माया जाल रच्दछ तर असुरहरुले यो कुरा चालपाएर काचाको हत्या गर्दछन् ।
छोरी देवयानीको अनुनयपछि शुक्राचार्यले आफ्नो संजिवनी मन्त्र प्रयोग गरेर काचालाई बचाँउदछन्, पूनः
असुरहरुले उनको हत्या गर्दछन् । शुक्राचार्यले हरेक पटक काचालाई मरेपछि बचाँउदछन् । अन्त्यमा
असुर सेनाले काचालाई मारेर अनि उसको शरीर पिसेर मदिरामा हालेर झुक्कयाएर शुक्राचार्यलाई सेवन
मदिरा सेवनपछि पेटमा दर्द भएका शुक्रार्चायले सबै कुरा चाल पाएर पेट भित्रका काचालाई मन्त्र भनेर आफ्नो पेट चिरेर बाहिर निकाल्दछन् । यसरी निस्केका काचाले त्यही मन्त्र प्रयोग गरेर पेट चिरेर मरेका शुक्राचार्यलाई बचाँउदछन् । यसरी मदिराको नशाले समस्या आउने र सवेंदनामा खलल पुग्ने जानेर शुक्रचार्यले महाभारतमा भनेको श्लोक यसप्रकार छ ।
अर्थात कुनै पनि ब्राहमणले मुर्खता पूर्वक मदिरा सेवन गरेमा धर्म भ्रष्ट भएको मानिनेछ । यसलाई ब्रहमहत्याको पापका साथै यस लोक र अर्को लोकमा पनि मुक्ति नमिल्ने भनिएको हो ।
हुन त परापूर्व कालमा पनि क्षत्रिय हरुले मदिराको सेवन न्यून मात्रामा ओखतीका तवरले गरेको भन्ने
पाइन्छ तथापि स्वास्थका दुष्टिले अनि धर्मका रुपमा मदिरा सेवन प्रश्रयमा राखिएको भने छैन् । स्मरण रहोस् भगवान राम पनि क्षत्रिय नै हुन् । भागवत गीतामा ब्राहमणलाई जन्म भन्दा पनि कर्म, दान, त्याग अनि अध्ययनको उपज मानिएको छ ।
हिन्दु सनातन परम्परामा मन्त्र पूजारी समुदायले मदिरा सेवन लाई प्रश्रय नदिएपनि तन्त्र पुजारी समुदायमा यसको प्रयोग सामाजिक र परम्परागत रुपमै पाइन्छ । पश्चिमा देशहरुमा घाउचोट लाई उपचार गर्न टिन्चर झोलका रुपमा बनस्पतीजन्य मदिरानै प्रयोग गरिन्छ र गरिदै आएको हो । आर्यूवेदमा पनि यस्तै बनस्पतीका झोलहरुका रुपमा असभस र अरिस्थासका प्रयोग उल्लेखित गरिएको हो । पौराणीक कालमा अझ चारक संहितालाई उद्धत गर्न चाह्यौं, मदिराजन्य झोलाहरुलाई बनस्पती वाट बनाइने र अन्नवाट बनाइने दुई रुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । अन्न वाट बनाइने र भारी मात्रामा उत्पादन गरेर सेवन गरिने मदिरालाई असुरहरुको आहारका रुपमा मानिन्छ, यसलाई कडा बर्जित गरिएको छ । बनस्पती जन्य मदिरालाई ओखतीका रुपमा थोरै प्रयोग गर्ने गरिएको र्इतिहास भने जगजाहेर छ । तथापि अत्याधिक मदिरा सेवन र दुरुप्रयोगलाई भनें सनातन सस्कारमा सामाजिक र मानसिक समस्याका रुपमा हेरिन्छ ।
मदिरा सेवन हानीकारक छ, यदि गर्ने नै हो भने सीमा मा रहेर गर्नु होला ।
हामी त मदिरालाई सेवन बन्द गर्नुपर्दछ अनि मात्र स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने बिश्वास गर्दछौं ।